windows တတ််တတ်ချင်းမှာ ပေါ်လာတဲ့ အသံကိုပြောင&# - MYSTERY ZILLION
windows တတ််တတ်ချင်းမှာ ပေါ်လာတဲ့ အသံကိုပြောင&#
March 2010 edited April 2010 in Windows XP
ကျွန်တော့ ကွန်ပျူတာမှာ windows XP SP3 ကိုတင်ထားပါတယ်။ ကွန်ပျူတာကို ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင် ဖွင့်ဖွင့်ချင်းမှာ သူဟာသူထွက်လာတဲ့အသံလေး တစ်ခုရှိပါတယ်။ တစ်စက္ကန့်၊ နှစ်စက္ကန့်လောက်ပဲ ကြာတာပါ။ ကျွန်တော်က အဲဒီအသံနေရာမှာ သီချင်းတစ်ပုဒ်က အသံလေးကိုထည့်ချင်လို့ပါ။ အဲဒီလိုမျိူးပြောင်းလို့ ရပါသလား?
တကယ်လို့ပြောင်းလို့ရရင်ကော် အချိန်အကန့်အသတ် ရှိပါသလား?
ရပါတယ်ခင်ဗျ။ Control panel ထဲကိုသွားလိုက်။ ပြီးရင် Sound & Audio Device properties ထဲကိုဝင်လိုက်။ ဒုတိယ tab (sound) ကိုပြောတာပါလေ။ အဲဒီထဲမှာ Program events ဆိုတဲ့အထဲမှာ ပြောင်ချင်သောအသံကိုပြောင်းလို့ရပါပြီ။ window အတက်သံဆိုရင် start windows ဆိုတာကိုလိုက်ရှာပြီရင် select ပေး။ပြီးရင် browseကိုနှိုပ် ကိုယ်ပြောင်ချင်တဲ့အသံ file ရှိတဲ့နေရာကို ညွန်းလိုက်ပါ။ အဲဒါပေမယ့် ပြောင်ချင်တဲ့ဟာကိုတော့ select တော့ပေးဦးနော်။ မေ့မှာစိုးလို့သတိပေးတာပါ။တော်ကြာပြောင်းမရဘူးဖြစ်နေမှာစိုးလို့ပါ။ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျား။
ရှိပါတယ် ...နဂို အသံလောက်ပဲ ကြာပါတယ် ...အကိုပြောသလိုပေါ့ ...တစ်စက္ကန့် ၊ နှစ်စက္ကန့် ပေါ့
zawmio နဲ့ မိုးနတ်သားလေး ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှပြောဖြစ်ပေမဲ့ စာကိုတော့ ဖြေပေးတဲ့နေ့ကတည်းက ဖတ်ဖြစ်လိုက်ပါတယ်။